मध्यरातमा एसियाकै चर्चित न्युरोसर्जन उपेन्द्र देवकोटाको निधनको खबर एकाएक भाइराल – Todays Nepal
मध्यरातमा एसियाकै चर्चित न्युरोसर्जन उपेन्द्र देवकोटाको निधनको खबर एकाएक भाइराल
By टुडेज नेपाल	 On Jun 9, 2018
अहिले मध्यरातमा एसियाकै चर्चित न्युरोसर्जन उपेन्द्र देवकोटाको निधनको खबर एकाएक भाइराल भएको छ । सामाजिक संजालमा एकाएक उक्त खबर भाइरल भएको हो । तर अन्नपूर्ण पोष्टका अनलाइन सम्पादक पत्रकार ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले दिएको जानकारी अनुसार देवकोटा अहिले आराम गरिरहेका छन् । तर यता सामाजिक संजालमा भने उनको मृत्यु भैसक्यो भन्दै स्टाटस राख्दै हार्दिक श्रदान्जली दिन हतार गरेका छन् ।
कतिले त उनको मृत्युको खबर लेख्न हतारिने भन्दै सामाजिक संजालमा आक्रोश पनि पोखेका छन् । यसरि एकाएक हल्ला चलेपछि पत्रकार ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले आफ्नो फेसबुक वलमा परिवारसंगको फोन सम्पर्क पछि स्टाटस लेख्दै भनेका छन् :
न्यूरो अस्पताल बाँसबारीमा भर्खरै फोन गरेर सोधेँ, डा उपेन्द् देवकोटाको अवस्था के हो ? कस्तो छ उहाँलाई ? उत्तर आयो: उहाँमाथि (माथिल्लो तल्लामा) आराम गरिरहनु भएको छ, अहिलेसम्म नराम्रो खबर केही छैन । यता सामाजिक सञ्जालमा निधन भएको घोषणा गरेर श्रद्धाञ्जली दिइसके । धत्तेरी हामी र हाम्रो मानवीय सम्वेदना, मान्छे बाँचेको भन्दा चाँडो मरेको हेर्न चाहने उत्कृष्ट मानव जाति हामी !
यता गोपाल गर्तौलाले समेत ११:२७ सम्म उनलाई केहि पनि नभएको स्पष्ट पारेका छन् । प्रहरीले पनि हालसम्म त्यस्तो जानकारी नरहेको बताएको छ । तर सामाजिक संजालमा भने उनको निधन भएको खबर भाइरल नै भइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय गोटीलाई उचाले, अब प्रचण्ड भन्दा उपेन्द्र अघि आउन सक्छन्
मन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई सुरक्षाकर्मीले छाता ओडाइदिएको फोटोमाथि आलोचना